सोसाईटी चेन्ज गर्न धेरै कामहरु गर्नुछ : एनिका र अनमोल, लिटल आइकन–२ | Purnapusti Khabar
सोसाईटी चेन्ज गर्न धेरै कामहरु गर्नुछ : एनिका र अनमोल, लिटल आइकन–२
क्यानभास एकेडेमी, गाईघाटमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत एनिका खड्का गत भदौ ७ गते गाईघाटमा भएको यमाहा मिस्टर एण्ड मिस लिटल आईकन, सिजन–२ को विजेता हुन् । बालबालिकाका क्षमता, प्रतिभालाई प्रस्तुतीको अवसर दिदै उनीहरुमा आत्मविश्वास बढाउने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रमबाट उनी उदयपुरको दोस्रो लिटल आइकन बनेकी हुन् । बुबा टिका खड्का र आमा निर्मला खड्काको साथ, सहयोग र साथीभाइको प्रेरणाबाट आइकन बनेको बताउने एनिका सानै भएपनि कुराकानीमा परिपक्कता र बौद्धिकता देखाउछिन् । त्यसैले पनि उनी आइकन बन्न सफल भईन् ।
उनी जस्तै केटाहरुको तर्फबाट उदयपुर इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल गाईघाटमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत अनमोल थापा पनि आइकन बनेका छन् । बुवा अस्विनकुमार थापा र आमा सरिता गेलाल थापाको साथ र सहयोगबाट आइकनमा भाग लिएर आइकन बन्न सफल भएका उनी रमाईलो कुराकानी गर्नमा पनि माहिर देखिन्छन् । पूर्णपुष्टिकी सम्बाददाता प्रतिक्षा मगरले दुबैसंग गरेको रमाईलो कुराकानी प्रस्तुत छ :
पूर्णपुष्टि : कस्तो लागिरहेको छ लिटल आइकन बन्न पाउदा ?
एनिका : मलाई एकदमै प्राउड फील भइरहेको छ र खुसि पनि लागिरहेको छ । तेत्तिका धेरै कन्टेस्टहरु हुनुहुन्थ्यो, सवैजनालाई जितेर आफु विनर हुँदा एकदम धेरै प्राउडको कुरा हो ।
अनमोल : म त यति खुसि भए की, म भन्न पनि सक्दीन । सुरुमा, चाँहि टप फाइभमा आउदा अलि डर लागेको थियो तर पछि सबै ठीक लाग्यो ।
पूर्णपुष्टि : लिटल आइकन हुन कसरी सफल हुनु भयो त ?
एनिका : पहिलो कुरा त मेरो परिवारले सपोर्ट गर्नुभयो । यदि मेरो परिवारले सपोर्ट नगर्नु भएको भए म यहाँसम्म आइपुग्ने थिइन होला । त्यसपछि आफ्नो मेहनत र कोरियोग्राफरले जसोजसो भन्नु भयो त्यसरी नै मेहनत गर्दै गएँ । यसैगरी म सफल हुन पुगँे ।
अनमोल : मलाइ बाबाले ठूलो सपोर्ट गर्नुभयो । उहाँले मलाई बाबु तिमी फस्ट हुन्छौं भनेर प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो ।
पूर्णपुष्टि : लिटल आइकन नै बन्छु भन्ने होप चाँही कति थियो ?
एनिका : सबैलाइ होप त हुन्छ नै । मलाई पनि होप त थियो । थर्टीन जना कन्टेस्टमा डर त लाग्थ्यो । कसैलाइ चिनेको थिइन । म त्यहा भइन भने के गर्ने ? कसो गर्ने ? म त्यहा हुन्छु कि हुदिन ? त्यहि पनि मैले फीनालेमा राम्रो तयारी गरेपछि टप टप फीप्टीन भएँ । टप फिप्टिनमा मेरो नाम आयो, धेरै खुसी भएँ । त्यसपछि टप फाइभ आइपुगेँ । यसरी नै विनर हुन पुगेँ ।
अनमोल : होप त थियो तर म भन्दा पनि राम्रो–राम्रो कन्टेस्टहरु थिए । म चाँहि कसरी भए त्यो मलाई थाहा भएन ।
पूर्णपुष्टि : आइकन भन्नाले के रहेछ त ?
एनिका : आइकन भनेको आफैलाई रीप्रीजेन्ट गर्नु हो । अरुले जे सिकायो त्यहि गर्ने, पढाइ भन्दा फाल्टो अरु केहि गर्नु । आफुले केहि गर्नु पढाइको इन्भाइरोमेन्ट भन्दा बाहिर बसेर पढाइ भन्दा फाल्टो सोचेर, आफ्नो ट्यालेन्टलाइ रिप्रीजेन्ट गर्नु भनेको आइकन हो जस्तो लाग्छ ।
पूर्णपुष्टि : अहिले यो सानो उमेरमा लिटल आइकन बन्नु भयो, अब भबिष्यमा के बन्नु हुन्छ ?
एनिका : अब, म त अहिले पढ्दै छु । मेरो प्राथमिकता चाँहि पढाइ नै हुन्छ । पढ्दै जाने हो । अब पढ्दै जादा के हुन्छ । मेरो लक्ष भनेको डक्टर बन्नु हो ।
अनमोल : मेरो बाबा चिफ डिस्ट्रीक अफीसर बन्न चाहानु हुन्थ्यो तर बन्न सक्नु भएन । म चाँहि चिफ डिस्ट्रीक अफीसर बन्न चाहान्छु ।
पूर्णपुष्टि : अब केही रुचिका कुरा गरौ है…
-कुन खेल मन पर्छ
अनमोल : ब्याडमिन्टन
एनिका : फुटबल
-कुन रङ मन पर्छ
अनमोल : रेड
एनिका : पर्पल
-सबैभन्दा मन पर्ने खानेकुरा के हो ?
अनमोल : म्याङगो
एनिका : फ्रुटमा चाहि म्याङगो । खानेकुरामा मम, चाउमिन, पानीपुरी, चटपटे ।
-राम्रो लागेको शिक्षक को हुनुहुन्छ ?
अनमोल : कृष्ण शर्मा सर ।
एनिका : सबैजना मन पर्छ, स्कुलमा म क्यानभास पढ्दा धेरै सपोर्ट गर्ने महेश पोखरेल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै हो ।
पूर्णपुष्टि : अव, केही समान्य ज्ञानतिर पनि जाउँ है…
-बलदेव चौधरी कुन नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ ?
एनिका : त्रियुगा नगरपालिका ।
-बीरबहादुर बुढामगर प्रहरीको को हुनुहुन्छ ?
दुबै : थाहा छैन ।
(जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी)
-उदयपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थाहा छ ?
-त्रियुगा नगरपालिका कतिवटा वडाहरु छन् ?
एनिका : १६ वटा
-उदयपुरको प्रमुख धार्मीक एवम् पर्यटकीय स्थल रौता पोखरी कुन गाउँपालिकामा पर्छ ?
एनिका : रौता पोखरी
पूर्णपुष्टि : अव, फेरी आइकनतर्फ नै जाउँ है…
आइकन भएपछि समाजमा के भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
एनिका : आइकन भएपछि, फाल्टै एस्पेक्ट त हुन्छ नै । तर, सोसाईटीमा चाँही सबैले मोडलिङ भनेपछि राम्रो मान्दैन, नेगेटिभ इन्पेक्ट परेको छ । पढाई विगार्ने, यताउति भन्छन् । अव म आइकन भएँ, मेरो रेस्पोन्सीबीलिटी भनेको मोडलिङको बारेमा राम्रो नोटिस दिने सबैलाई । मोडलिङको कारणले पढाई विग्रिन्छ भन्छन् त्यो हैन । भर त आफुमा पर्छ नी । आफुले पनि गर्न सक्नु पर्यो । त्यस्ता सोसाईटीबाट नेगेटिम इन्प्याक्ट हटाउने, सबैलाई राम्रो काममा इन्करेज गर्ने, मोडलिङका राम्रो इन्फरमेसनहरु दिने र सोसाईटीमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने, त्यही हो ।
अनमोल : म चाँही साथीहरुलाई सुुनाउछु । कसरी फस्ट भए भन्ने कुरा भन्छु ।
पूर्णपुष्टि : यो त एउटा प्रतिभा भयो, अरु–अरु प्रतिभाहरु पनि होलान नी ? जस्तौ नाँच्न, गाउँन….
एनिका : स्कूलमा प्रोग्रामहरु भईराख्छ । डान्स गर्छु, साथीहरुसंग गाउँछु । स्पोर्टस्हरुमा पनि पार्टिसिपेन्ट हुन्छु । डिभेटहरुमा पनि पार्टिसिपेन्ट भईराख्छु ।
अनमोल :खासगरी क्लावसमा चाँही जोक भन्दा सबैजना हाँस्छन् ।
पूर्णपुष्टि : कुराकानीका लागि समय दिनुभयो, धेरैधेरै धन्यवाद ! अव पनि यस्तै प्रयासहरु गर्दै जाँनु शुभकामना । अन्तमा केही छ की ?
अनमोल : मिथुन सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
एनिका : यो पटकको सिजन टुमा हामी दुईजना आइकन भयौं । सोसाईटीलाई चेन्ज गर्न धेरै कामहरु गर्नु पर्नेछ । त्यहि कामका लागि हजुरहरु सबैको सपोर्टको आशा गर्दर्छौ । साथै सम्पूर्ण आयोजक टिमहरु, मिथुन सर, निसान सर, सभ्याता म्याम, मिन्टरहरुलाई धेरैलाई थ्याङ्क्यु भन्न चाहन्छौं । हजुरहरुलाई पनि थ्यांक्यू भन्न चाहन्छौं ।
विश्वभर चिनियो नेपाली गीत– फुलबुट्टे सारी
“मेरो माया” म्यूजिक भिडियोसहित गायनमा दिपनको उदय
राजकुरमार रावले ‘मोनिका, ओ माई डार्लिङ्ग’ फिल्मका लागी लिए १५ करोड
उदयपुरको तोपराज ब्याटल राउण्ड पार गर्दै भ्वाइसको नक आउटमा प्रवेश
ग्ल्यामर गफ को प्रशारण अनिश्चितकालको लागि बन्द
बैशाख अन्तिमसम्म चलचित्र भवनहरु बन्द
नायिका ऋचा शर्मा पनि आमा बन्दै, भावुक स्टाटस लेख्दै फ्यानहरुलाई जानकारी गराईन्
उदयपुरबाट अर्को प्रतिस्पर्धी योगेन्द्र राई भ्वाईसको ब्याटल राउण्डमा प्रवेश